Intii Aad Cashada Ahayd ee Daawatay TV, Waxaan Dhisaynay Ganacsi | Martech Zone
Intaad Cashada Wadahayseen oo aad Daawateen TV, Waxaan Dhisaynay Ganacsi
Sabti, Noofembar 13, 2010 Sabtida, Oktoobar 18, 2014 Ball Lorraine
Toddobaadkan dhammaadkiisa, 57 ganacsade ayaa ka shaqeynayay sidii loo bilaabi lahaa toddobo ganacsi oo cusub. Laga soo bilaabo qalabka softiweerka iyo warbaahinta bulshada illaa miiska laptop-ka la qaadan karo, fikradaha ayaa bilaabaya inay isu yimaadaan.
Iyo haddii aad xiiseyneyso ku filan sida waxaas oo dhami u soo baxayaan, iyo waxa garsoorayaasha (oo ay ku jiraan Douglas Karr) ka fikir fikradaha ganacsiga, nagu soo biir isku xirka iyo bandhigyada ugu dambeeya habeenka Axadda: http://www.eventbrite.com/event/851407583
Tags: indianapolisganacsi bilowxawaaladahabilowga usbuuca
Falanqayntaada ayaa la waayey Calaamadda
Nov 13, 2010 saacadu markay tahay 1:21 PM
Mid ka mid ah shirkadaha aan ka shaqeyno waxaa lagu magacaabaa eatdrinkit. Waxaan joogi doonnaa eatdrink.it waadna na raaci kartaa @eatdrinkit. Sii wad daawashadaada, waxaan soo bandhigi doonaa macluumaad dheeri ah markaan kuso dhowaanno garoonka Axada. Waxaan jeclaan lahayn inaan kugu aragno garoonka dhexdiisa si aad ugu codeyso adeegsiga. Waxaan u maleynayaa inaad ka helayso waxa aan sameyneyno!